ဝန်ထမ်းတွေကို ဘောက်ဆူးပေးပြီး ပျော်ရွှင်စေခဲ့တဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ - 9style
မိသားစုကို ရှာကျွေးနေတဲ့ သမီးလေးမှ ဖြစ်ရတယ် (ကူညီပေးလိုက်ကြပါဦး)
မြမြသရဲဝင်ပူးတဲ့ မိန်းကလေးနေရာမှာ သရုပ်ဆောင်မယ့် ဝင်းသပြေထွန်း
စပါးကြီးမြွေ ဖမ်းလာသူများကို အမှုဖွင့်ရန် သစ်တောဌာနက စုံစမ်းနေ
ဘဏ်ဝန်းကျင်မှာ ဆိုင်ကယ် ကယ်ရီသမားလိုလို၊ပွဲစား လိုလို၊လူဆိုး လူကောင်း ရယ်လို့.. ဝေခွဲလို့ မရတဲ့ အလစ်သုတ်မည့် သူခိုး လူရမ်းကားတွေ
သမီးလေး Treasure ရဲ့ အသုံးအဆောင်လေးတွေကို ပရိသတ်တွေဆီ လက်ဆောင်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ စန္ဒီမြင့်လွင်
ဝန်ထမ်းတွေကို ဘောက်ဆူးပေးပြီး ပျော်ရွှင်စေခဲ့တဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ
” စီးပွားရေးသောင်းကျန်းပြီး ပရစ်ကြော်ရောင်းနေတဲ့ အလင်းရောင် “
မွေးနေ့မှာ မိသားစုနဲ့အတူ ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ချောရတနာ
မျက်စိတစ်ဆုံးကျယ်တဲ့ လာဗန်ဒါပန်းခင်းကြီးထဲမှာ သတို့သမီးဝတ်စုံလေးနဲ့ လှနေတဲ့ ခင်လေးနွယ်
သက်ကြီးလူရွှင်တော်တွေကို ပကာသနမပါပဲ သိန်းဆယ်ချီလှူဒါန်းခဲ့တဲ့ မြင့်မြတ်
Home/နာမည္ႀကီးပုဂၢိဳလ္မ်ား/ဝန်ထမ်းတွေကို ဘောက်ဆူးပေးပြီး ပျော်ရွှင်စေခဲ့တဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ
TjrxgWfzULaCgCdvDE3weeks ago
လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေတြကတည္းက ဆံႏြယ္ရွည္ရွည္ရယ္၊ ခ်ိဳသာလြန္းတဲ့ အၿပဳံးေလးေတြရယ္နဲ႔ ပရိသတ္ေတြကို အခ်စ္ပိုေစခဲ့တဲ့ မင္းသမီးေခ်ာေလး ခိုင္ႏွင္းေဝကေတာ့ လက္ရွိမွာ အႏုပညာအလုပ္ေတြလုပ္ရင္း ပရဟိတ အလုပ္ေတြလည္း အင္တိုက္အားတိုက္ ျပဳလုပ္ေနသူတစ္ဦးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ခိုင္ႏွင္းေဝပရဟိတလူငယ္မ်ားအသင္း ကိုလည္း တည္ေထာင္ထားတဲ့ ခိုင္ႏွင္းေဝကေတာ့ မိဘမဲ့ကေလးေတြကိုလည္း သူမရဲ႕သားသမီးအရင္းေတြလို ေမြးထားသူေလးပါ။ လတ္တေလာမွာေတာ့ ခိုင္ႏွင္းေဝက သူမရဲ႕ ပရဟိတအသင္းမွာ အလုပ္လုပ္ေနၾကတဲ့ ဝန္ထမ္းေတြကို ေဘာက္ဆူးေပးၿပီး ေပ်ာ္ေစခဲ့တဲ့အေၾကာင္း လူမႈကြန္ယက္မွာ ေဝမွ်ေပးထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။
ခ်စ္ပရိသတ္ေတြအတြက္ အရမ္းကို ၾကည္ႏူးဖို႔ေကာင္းတဲ့ ခိုင္ႏွင္းေဝရဲ႕အလႉေလးအေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။
ခိုင္ႏွင္းေဝကေတာ့ “တလတခါ လစာထုတ္ေပးတိုင္း ဝန္ထမ္းေတြအတြက္ အပိုေဘာက္ဆူးမ်ားေပးတဲ့ထုံးစံအတိုင္း ဒီလမွာေတာ့ၿပီးခဲ့တဲ့လကလိုတေယာက္ထဲကိုမရေစပဲ. ဗလာမပါကံစမ္းမဲမ်ားလုပ္ၿပီး မဲေဖာက္ေပးခဲ့ပါတယ္…ဒီလဝန္ထမ္းေဘာက္ဆူးမွန္ပုံးစုစုေပါင္း — ၁၂၅,၆၀၀ရရွိပါတယ္…နည္းသည္မ်ားသည္မဟုတ္ပဲ က်မေဂဟာေရာက္တိုင္းလည္း ဝန္ထမ္းေဘာက္ဆူးမွန္ပုံးေလးထဲကိုထည့္ေပးတယ္. ေဂဟာကိုလာတဲ့အလႉရွင္ေတြကလည္းထည့္ေပးၾကတဲ့အတြက္အခုလို က်မရဲ႕ဝန္ထမ္းေတြကိုေပ်ာ္႐ႊင္ေအာင္လုပ္ေပးႏိုင္တာပါ…က်မရဲ႕သားသမီးေတြအေပၚေစတနာေမတၱာတရားအျပည့္ျဖင့္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေပးတဲ့အတြက္ ဝန္ထမ္းမ်ားအားလုံးကိုခ်စ္ပါတယ္လို႔ေျပာခ်င္ပါတယ္…ကေလးတို႔ရဲ႕ေမေမ ခိုင္ႏွင္းေဝ” ဆိုၿပီး သူမတတ္ႏိုင္တာေလးေတြနဲ႔ ကေလးေတြကို ေပ်ာ္႐ႊင္ေစခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းေဖာ္ျပေပးထားတာပါ။
ဝန္ထမ္းေတြရဲ႕အၿပဳံးက ၾကည့္ရသူေတြကိုပါ ေပ်ာ္႐ႊင္မႈေတြ ကူးစက္ေစပါတယ္ေနာ္…။
အႏုပညာအသိုင္းအဝိုင္းမွာေရာ၊ ျပင္ပလူမႈကူညီေရးေတြမွာပါ စိတ္ေရာကိုယ္ပါ ႏွစ္ၿပီး ႀကိဳးစားေနတဲ့ ခိုင္ႏွင္းေဝကေတာ့ သူမေမြးစားထားတဲ့ ကေလးေတြကိုလည္း သားသမီးအရင္းေတြလို ေစာင့္ေရွာက္သူတစ္ဦးပါ။ခ်စ္ပရိသတ္ေတြလည္း အရမ္းကို စိတ္ထားေကာင္းတဲ့ ခိုင္ႏွင္းေဝရဲ႕အလႉေလးအေၾကာင္းကို သေဘာက်ရင္ Shareသြားၾကဖို႔ မေမ့ပါနဲ႔ေနာ္။Credit-aungparsay
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်တွေကတည်းက ဆံနွယ်ရှည်ရှည်ရယ်၊ ချိုသာလွန်းတဲ့ အပြုံးလေးတွေရယ်နဲ့ ပရိသတ်တွေကို အချစ်ပိုစေခဲ့တဲ့ မင်းသမီးချောလေး ခိုင်နှင်းဝေကတော့ လက်ရှိမှာ အနုပညာအလုပ်တွေလုပ်ရင်း ပရဟိတ အလုပ်တွေလည်း အင်တိုက်အားတိုက် ပြုလုပ်နေသူတစ်ဦးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ခိုင်နှင်းဝေပရဟိတလူငယ်များအသင်း ကိုလည်း တည်ထောင်ထားတဲ့ ခိုင်နှင်းဝေကတော့ မိဘမဲ့ကလေးတွေကိုလည်း သူမရဲ့သားသမီးအရင်းတွေလို မွေးထားသူလေးပါ။ လတ်တလောမှာတော့ ခိုင်နှင်းဝေက သူမရဲ့ ပရဟိတအသင်းမှာ အလုပ်လုပ်နေကြတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေကို ဘောက်ဆူးပေးပြီး ပျော်စေခဲ့တဲ့အကြောင်း လူမှုကွန်ယက်မှာ ဝေမျှပေးထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက် အရမ်းကို ကြည်နူးဖို့ကောင်းတဲ့ ခိုင်နှင်းဝေရဲ့အလှူလေးအကြောင်းကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
ခိုင်နှင်းဝေကတော့ “တလတခါ လစာထုတ်ပေးတိုင်း ဝန်ထမ်းတွေအတွက် အပိုဘောက်ဆူးများပေးတဲ့ထုံးစံအတိုင်း ဒီလမှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့လကလိုတယောက်ထဲကိုမရစေပဲ. ဗလာမပါကံစမ်းမဲများလုပ်ပြီး မဲဖောက်ပေးခဲ့ပါတယ်…ဒီလဝန်ထမ်းဘောက်ဆူးမှန်ပုံးစုစုပေါင်း — ၁၂၅,၆၀၀ရရှိပါတယ်…နည်းသည်များသည်မဟုတ်ပဲ ကျမဂေဟာရောက်တိုင်းလည်း ဝန်ထမ်းဘောက်ဆူးမှန်ပုံးလေးထဲကိုထည့်ပေးတယ်. ဂေဟာကိုလာတဲ့အလှူရှင်တွေကလည်းထည့်ပေးကြတဲ့အတွက်အခုလို ကျမရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုပျော်ရွှင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တာပါ…ကျမရဲ့သားသမီးတွေအပေါ်စေတနာမေတ္တာတရားအပြည့်ဖြင့်ပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးတဲ့အတွက် ဝန်ထမ်းများအားလုံးကိုချစ်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်…ကလေးတို့ရဲ့မေမေ ခိုင်နှင်းဝေ” ဆိုပြီး သူမတတ်နိုင်တာလေးတွေနဲ့ ကလေးတွေကို ပျော်ရွှင်စေခဲ့တဲ့ အကြောင်းဖော်ပြပေးထားတာပါ။ဝန်ထမ်းတွေရဲ့အပြုံးက ကြည့်ရသူတွေကိုပါ ပျော်ရွှင်မှုတွေ ကူးစက်စေပါတယ်နော်…။အနုပညာအသိုင်းအဝိုင်းမှာရော၊ ပြင်ပလူမှုကူညီရေးတွေမှာပါ စိတ်ရောကိုယ်ပါ နှစ်ပြီး ကြိုးစားနေတဲ့ ခိုင်နှင်းဝေကတော့ သူမမွေးစားထားတဲ့ ကလေးတွေကိုလည်း သားသမီးအရင်းတွေလို စောင့်ရှောက်သူတစ်ဦးပါ။ချစ်ပရိသတ်တွေလည်း အရမ်းကို စိတ်ထားကောင်းတဲ့ ခိုင်နှင်းဝေရဲ့အလှူလေးအကြောင်းကို သဘောကျရင် Shareသွားကြဖို့ မမေ့ပါနဲ့နော်။Credit-aungparsay
သင္ဇာကို မုဒိမ္းက်င့္ဖို႔ သ႐ုပ္ေဆာင္ျပတဲ့ Video အရမ္းသေဘာက်ေနၾကဘီ
ဝေဠုကျော် က video ရိုက်ချင်ပေမဲ့ မြန်မာမိန်းကလေးမို့ ရှက်လို့မရိုက်ပဲ အသံသွင်းခိုင်းလို့ အသံသွင်းခဲ့တာပါဆိုတဲ့ သင်းသင်း
ဟိန်းမင်းသူနဲ့အတူ သီချင်းများစွာကိုလိုက်ဖက်ညီစွာသီဆိုကပြဖျော်ဖြေခဲ့တဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်ရဲ့အမိုက်စားVideoလေး
အျပာကားကိစၥ နန္းေမြစံ ေျပာျပီ
အလိုက်ကမ်းဆိုး နားမလည်တဲ့ မအေးသောင်းကို ပညာသားပါပါ တုန့်ပြန်လိုက်တဲ့ နန်းဆု
အွန်စောနဲ့တူချင်လို့ ဆံပင်ကိုတောင် အတိညှပ်ထားတယ်ဆိုတဲ့ ဆောင်းယွန်းစံ
ေမၿမိဳ႕မွာ သရဲအေျခာက္ခံလုိက္ရတဲ့ အေၾကာင္းေျပာလာတဲ့ ဟိန္းေဝယံ
မလိုခ်င္လို႕ စြန္႕ပစ္ခဲ့တဲ့လူေတြကို ခပ္ပါးပါးေလး ေခ်လိုက္တဲ့ ေမေမေအသင္ခ်ိဳေဆြ
ေက်ာင္းထဲမွာ အလြယ္တကူ မုဒိမ္းက်င့္ရတဲ႕ေနရာရွိသလား
အလွဴရွင္မရိွလို႕ ေန႕စဥ္ ပဲျပဳတ္နဲ႕ စားေနရတဲ့ ပရဟိတမိဘမဲ့​ေက်ာင္​းေလး
ျမန္မာမေတြတဏွာၾကီးေၾကာင္း ရိုက္ကူးျပထားလို႕ ပြဲဆူခံေနရတဲ့ တရုတ္ႏိုင္ငံက ဗီဒီယိုတစ္ခု
အျမန္ဆံုး ျပန္လည္ေတြ႔႐ွိႏိုင္ရန္ ကူညီၾကပါခင္ဗ်ာ🙏🙏🙏
9Style is your news, entertainment website. We provide you with the latest breaking news and videos straight from the entertainment industry. 9Style also provides the best experience through its dedicated mobile friendly site. Readers can read both Zawgyi and Unicode Font.
© Copyright 2019, All Rights Reserved |9Style